Antergos Linux Project Inosheedzera Rufu rweAntergos | Linux Vakapindwa muropa
Pasina nguva refu yapfuura, anotungamira musimudziri weLinux Mint akataura kuneta kwake uye kusuwa paanenge achishanda pane yake yekushandisa system. Izvo hazvifanire kuve nyore kugadzira yakakura Linux kugovera, nezvose izvo zvinoreva, uye kurarama munyika umo izere nesarudzo. Imwe yematambudziko inogona kunge iri yekushaikwa kwenguva yemahara, kunze kwekunge iwe wawana rubatsiro runotendera vanogadzira kuti vashande pane yako yekugovera yakazara nguva. Izvi ndizvo zvakaitika Antergos, inoshanda system yakazivisa kuonekana kwake Nezuro.
Sekutsanangura kunoita Antergos Linux Project, vakaburitsa vhezheni yekutanga yavo sisitimu inoshanda makore manomwe apfuura. Chinangwa chake chaive chekuita zvishoma zvakaitwa naBuntu naDebian: kuunza yakakura yekushandisa system kune yakakura nhamba yevanhu, mune yake Arch Linux. Uye vakabudirira. Mumakore mashanu, mashandiro ayo akaburitswa kanosvika ka5 miriyoni, icho chisiri chinhu chidiki kana tichifunga, kutanga, kuti iri Linux (vashoma zvine chekuita neWindows kana macOS) uye, chechipiri, huwandu hweshanduro yeLinux desktop kunze uko.
931.439 vanhu vakatora Antergos mumakore mashanu
Asi kukura kweAntergos kwaive kufarira, izvo zvaireva kuti aifanira kuzvikudziridza munguva yake yekusununguka. Mukushayikwa kwemipimo yekushandira mune yako sisitimu uye uchifunga kuti havasi kuzopa basa rakanaka, ndafunga kumisa chirongwa ichi. Ivo zvakare vanotenda kuti ikozvino inguva yakanaka yekuisiya, sezvo kodhi ichiri kushanda uye mumwe mugadziri anogona kutora uye kuenderera nebasa ravo, chimwe chinhu chavasina kutsanangura kana vachigona kuita nezita rimwe chete.
Vashandisi vatove kushandisa Antergos havafanirwe kunetseka: yavo inoshanda sisitimu ichaenderera ichidzokorora yakananga kubva kuArch Linux. Kune rimwe divi, Antergos Linux Project ichaburitsa inogadziridza iyo inobvisa zvinyorwa zvayo kubva muchirongwa, pamwe nechero imwe pombi chaiyo yeAntergos inomira kushanda mune ramangwana.
Pasina kupokana, ichi chirongo chemvura inotonhorera chevashandisi veAntergos vanofanirwa kunamatira kuti mumwe munhu aenderere mberi neprojekti kana kuchinjira kuArch Linux. Uri mumwe wavo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Antergos Linux Project inozivisa kufa kweAntergos
Ndinoona zvichinyanya kunzwisisika kune vashandisi veAntergos kuchinjira kuManjaro pane kuArch Linux.
HPLIP inogadziridzwa ichiwedzera rutsigiro rweUbuntu 19.04 uye Fedora 30
Linux 5.2-rc1 yave kuwanikwa, ichigadzirira yepakati-Chikunguru kuburitswa